ငါတို့က “ပေ” မဟုတ်တော့ဘူး | ဌေးလွင်ဦး | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ငါတို့က “ပေ” မဟုတ်တော့ဘူး | ဌေးလွင်ဦး
ပန်းဘဲထုရာမှာ- သံတစ်တုံးကို လိုချင်တဲ့ ပုံစံ ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ဘို့- အဲ့ဒီ သံတုံးကို မီးဖုတ်ပြီး အပေါ်က ထုတဲ့တူနဲ့ မီးဖုတ်ထားတဲ့ သံတုံးရဲ့ အောက်က ခံရတဲ့ ပေတုံး ဆိုတာ ရှိတယ်။- အမှန်တော့ ထုတဲ့ တူလည်း သံ ဖြစ်သလို၊ အောက်က ထုစရာအဖြစ်ခံထားရတဲ့ “ပေ”ကလည်း သံတုံးပါပဲ။ သံချင်းတူပေမယ့်- ပေဖြစ်တော့ အထုခံနေရပါတော့တယ်။- ဒါကြောင့် ဗမာစကားပုံတစ်ခု အဖြစ် “တူ ဖြစ်တုံး ထုထားပေါ့-” ပေါ့-၊ ဆိုတာ လူတိုင်းနီးပါး ကြားဘူးမှာပါ။ ဆိုလိုတာက သံချင်း အတူတူ- တစ်နေ့တစ်ချိန် ငါ “အထုခံနေရတဲ့ ပေတုံး”က တူ ပြန်ဖြစ်ပြီး- ထုနေတဲ့ “တူ”ကလည်း ပေ ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ သဘောပါ။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးများရဲ့ ပေါ်လစီနဲ့ နိုင်ငံရေး အားပြိုင်မှုများအရ-၊ မွတ်ဆလင်တွေကို အကြမ်းဖက်တွေ၊ စစ်သွေး ကြွတွေ၊ အတင်းအဓမ္မ သာသနာပြုသူတွေ၊ မိန်းမဗလပွယူသူတွေ၊ လူသတ်ကောင်တွေ-ရယ်လို့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ လောက် နာမည်ဖျက် ၀ါဒဖြန့်ခဲ့ကြတယ်။- ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး မွတ်ဆလင် လူနည်းစုနေထိုင်ရာ တိုင်းပြည် များက တစ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရများကိုယ်တိုင်က မွတ်ဆလင်တွေကို “ပေတုံး”သဖွယ် သဘော ထားက ထုချင်တိုင်း ထုခဲ့ကြတယ်။- မြောက်ကိုးရီးယား၊ ဗီယက်နာမ်၊ ကမ်ဘောဒီးယား၊ မြန်မာ၊ သီရီလင်္ကာ၊ ဘူတန်နိုင်ငံတို့က အဆိုးဝါးဆုံးထဲမှာ ပါခဲ့တယ်။
ဒီနေ့ ခေတ်ပြောင်းသွားခဲ့ပါပြီ။ မွတ်ဆလင် မုန်းတီးရေး ဦးဆောင်ဝါဒဖြန့်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကြီးများကိုယ်တိုင်က သူတို့ရဲ့ မူဝါဒများကို ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်ခဲ့တာ- ဆယ်နှစ်နီးပါး ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဒါကို ဗဟုသုတမဲ့နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ သီရိ လင်္ကာတို့လို ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံ လူသတ်ဘုန်းကြီး ဂိုဏ်း ကြီးစိုးနေတဲ့ အယူသည်းနိုင်ငံများက မသိခဲ့ရှာဘူး။
မိုးလွန်မှ ထွန်ချ- ဆိုသလို၊ အခုမှ ထပြီး မွတ်ဆလင်များကို မျိုးပြုတ်သတ်ဖြတ်ဘို့ ကြိုးစားလိုက်တော့-၊ နောက် ကျ သွားခဲ့ပါပြီ။ “လူဆိုး လူမိုက်တို့ရဲ့ အကြံအစည်များကို- ဘယ်တော့မှ အထမြောက်စေမှာ မဟုတ်ဘူး”လို့ ပြောထားတဲ့ ကုရ်အံကျမ်းစာလာ စကားဟာ လုံးဝမှန်ကန်ကြောင်း- လူဆိုးလူမိုက်များ မျက်ဝါးထင်ထင် မြင် သွားစေရမှာပါ။
အစ္စလာမ်သာသနာကိုး သက်ဝင်ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့- အဲ့ဒီ လူတစ်ဦးကို နှိမ့်ချတဲ့ သဘောနဲ့ “ကုလား” ဆိုပြီး ဆိုင်းဘုတ်တွဲ၊ ဟိုက ၀င်လာသလိုလို၊ ဒီက၀င်လာသလိုလို- မြန်မာပြည်မှာ မမွေးဘဲ မိုးပေါ်က ကျလာသလိုလို တွေ စွပ်စွဲ-၊ မွတ်ဆလင်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဥပဒေတွေ ပေါ်လစီတွေချမှတ်-၊ မျိုးစုံတွေ လျှောက်လုပ်နေခဲ့တာ လည်း နောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ။- ငါတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံသား အဖြစ် မသတ်မှတ်ရင်လည်း အရေးမကြီးဘူး-၊ အခု အချိန်မှာ ငါတို့က ကမ္ဘာ့ အသိအမှတ်ပြု ကမ္ဘာရဲ့ သားသမီးတွေ ဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ ငါတို့နဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေ ကြားမှာ၊ ငါတို့နဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ နိုင်ငံတွေကြားမှာ ကတိက၀တ်တွေလည်း ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိနေခဲ့ပြီ။ ဒီအခြေမျိုးထိ တွန်းပို့ခဲ့တဲ့- မြန်မာမျိုးချစ် အမျိုးဖျက်များကို ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။
ဥပဒေမဲ့နေတဲ့ အခိုက်အခန့်၊ လူဆိုးလူမိုက်တစ်သိုက်က- မတရားသဖြင့် အနိုင်ကျင့်နိုင်ရင် ခဏပါ။ မကြာမှီ အဲ့ဒီဒေသများထိ ဥပေဒတွေ ထိုးဖေါက်စိမ့်ဝင်လာတော့မှာပါ။ တရားခံတွေက ဘယ်ကိုမှ ပြေးလို့ မလွတ်ပါဘူး။ ရာသက်ပန် ရှာခဲ့သမျှ ဥစ္စာစီးပွား ပျက်စီးသွားရမယ့်နေ့၊ မျိုးဆက်လိုက် မျက်နှာသိမ်ငယ် သွားရမယ့်နေ့ရက်များ ခင်ဗျားတို့ဆီကို ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့က ဘက်က ကမ္ဘာတစ်ခုလုံး ရပ်တည်နေတယ်၊ နှိပ်ကွပ်လေ အမှု ကြီးလေသာ ဖြစ်ရပါမယ်။- ကမ္ဘာခုံရုံးမှာ- နအဖ လက်ထက်က အလုပ်သမားကိစ္စ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပြီ။ နအဖနဲ့ ဦးသိန်း စိန် စပ်ကူးမတ်ကူးကာလ- ဘင်္ဂလားနယ်စပ်က ပင်လယ်- ရေနံပိုင်နက် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပြီ။- အဲ့ဒီအမှုတွေ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရ စဉ် တစ်သီးပုဂ္ဂလ တရားခံအဖြစ် ခံရတာ မရှိဘဲ-၊ အစိုးရတစ်ရပ်အနေနဲ့သာ ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်။ တိုင်းပြည်တစ်ခု အနေနဲ့သာ ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်။ အဲ့ဒီက ထွက်လာတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေက တိုင်းသူပြည်သားများကိုသာ နစ်နာစေခဲ့ တယ်။ အခုတစ်ခေါက် ရင်ဆိုင်ရမယ့် နိုင်ငံတစ်ကာ ခုံရုံးကတော့- မျိုးပြုတ်သတ်ဖြတ်မှု ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတော့ တယ်။ ရင်ဆိုင်ရမှာကလည်း သက်ဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်ကောင်များသာ ဖြစ်ပြီး တစ်သီးပုဂ္ဂလ တစ်ရားခံကိုယ်စီ ဖြစ် နေပါတယ်။- ဒီအတွက်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များ အနေနဲ့ ကမ္ဘာ့ရှေ့နေရှေ့ရပ်များ ငှားယမ်းပြီး ပြင်ဆင် ထားစေလိုတယ်။ (ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက် မသုံးဘို့ ပြောတာပါ။) တူ ဖြစ်စဉ် ထုထောင်း ခဲ့သမျှ-၊ ဒီတစ်ခါ မိမိ ထုခဲ့တဲ့ ဒဏ်ကို မိမိသာ ခံရမှာပါ။
သေချာတာက–၊ ငါ တို့ကတော့ ပေ မဟုတ်တော့ဘူး ဆိုတာပါပဲ။
This entry was posted on December 16, 2012, in နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← Watch The Hidden Genocide this weekend and make up your own mind, Al Jazeera responds to Myanmar govt criticism
BROUK ADDRESSES ETHNIC CLEANSING ON ROHINGYA MUSLIMS AT BRITISH PARLIAMENT →